July (6) June (4) May (8) April (15) March (7) February (8) January (5) Masiibooyinka Daaqa oo ka dhammaaday deegaannadii abaarta ka roonaa ee Togdheer (ERGO) - Xasan Salaad oo ah 35 jir xoolo ku dhaqda miyiga deegaanka Widhwidh ee gobolka Togdheer ayaa labadii toddobaad ee u dambeeyay abaarta ku waayay ilaa 100 neef oo ari ahaa. Wuxuu sheegay i...
Warbixin ku saabsan deegaanada abaarta ka roonaa oo hadda xooluhu dhimanayaan Deegaanno ka tirsan degmada Buhoodle oo ka roonaa abaarta kama mid ah meelihi lagu soo hayaamay ayaa hadda dadka ku nool ee xoolo dhaqatada ah waxay wajahayaan daaq la'aan. Xoolaha ayaa dhimanay...
Guddiga taakulaynta abaarta Togdheer oo sheegaya inay istaagtay gurmadkii ay u fidinayeen dadka tabalaysan Guddiga taakulaynta abaarta ee gobolka Togdheer ayaa sheegaya in wakhtigaan aysan wax gurmad ah gaarsiin karin dadka ku tabaalaysan abaarta ee gobolkaas. Gudoomiyaha gudigaan Yuusuf Maxamed Diiriye ay...
Sool:Daanyeer xoolaha cunaya Roobki deryta ee sanadki tagay oo baaqday ayaa sababay in xaaladda abaarta ay ka sii darto. Waxaa ku xoolo beelay kumanaan qoys oo maanta cayr ah kuna nool gargaar. Waxaa sidoo kale ay saamasay xaywaa...
Daayeerro raxan ah oo xoolaha ku cunaya Sool saameynta abaarta darteed (ERGO) - Daayeer raxan-raxan u socda ayaa weerar ku qaadaya oo xoolaha iyo raashinkaba ka cunaya xoolo-dhaqatada ku nool miyiga degmooyinka Xuddun iyo Laascaanood ee gobolka Sool. Weerarradan oo ...